Millennials uye marudzi Reconciliation — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndichiri kuita izvozvo inotonhora uye anoshamisa, Handifungi kuti sezvo chaizvo sezvo vamwe kuti ani. Zuva nezuva pane Concerts seizvi zvose pamusoro nyika. Pane chinhu chakasiyana kuwana mhando dzakasiyana vanhu kuti unganai. Zvinoitika nguva dzose pamwe Concerts, kana zviitiko zvemitambo, nezvimwewo. Kana mifananidzo kana mitambo chikwata ndiyo musimboti pfungwa, vanhu varipo vari vakauya pamwe chete nokuda kwavaiita kuti mimhanzi kana kuti chikwata. vanhu ivavo havana chaizvoizvo kuva dzibatane. Havafanire kunyange here kuwirirana. Vanongouya kuti kushivirira mumwe vakaroorana maawa.
Izvozvo hazvina rudzi kubatana uye hwokuyananisa kuti tiri pashure. Kworudzi kubatana hakusi zvechigarire. Haibudisi chinhu. Vanhu ava havasi chaizvoizvo kushumira mumwe nomumwe. Uye hazvina chaizvoizvo kunongedzera kukudzwa kwaKristu uye Evhangeri yake saizvozvo.
The nokubatana mhando tiri pashure zvikuru usingaperi uye zvakawanda substantial- zvikuru norudo.
The nokubatana mhando tiri pashure hazvigoni zvinoberekwa zvawo chisakachena marimba kana tsika zvavanofarira. The nokubatana mhando tiri pashure unogona chete neve Gospel raJesu.
Uye kuti chokwadi Ndokusaka tiri kutaura pamusoro Gospel uye kwemarudzi kuyananiswa, kwete kwemarudzi kuyananiswa.
Funga mashoko aya kubva John 11:
... Akaprofita kuti Jesu aizofira rudzi, uye kwete rudzi chete, asiwo kuunganidza vana vaMwari vakapararira vave.
Ndiyo mhando kubatana tiri pashure:vanhu vaiva vazhinji uye yakasiyana zvose kuva mumwe.
kuguma kwedu chinangwa haisi Kungosvika vanhu vatema uye chena chete mukamuri. Jay-Z vanogona kuita kuti. chinangwa chedu ndechokuti kuzivisa rugare uye kubatana kuti Jesu akatoita uye kudana vanhu KUTI. Tinoda vanhu vanakidzwe kuzara ikoko uye kuparidza kwese vanoenda. Uye tinoda kuti muchizvarwa ose. Asi unogona kuuya chete kuburikidza Gospel.
kuchinja: KweMireniyamu chizvarwa iri Chokwadi vakazvarirwa mangwanani 80s kuna 2000s. uye isu (millennials) zvakanaka panguva yokutanga, nyore mhando kubatana. Asi zvakadini kuti kwakadzama, zvikuru nouchapupu, uye mhando kubatana yakaoma zvikuru?
Kana uri kweMireniyamu akafanana neni, zvino ndinoda kuti funga nzira tinogona kuramba kurwira kuyanana. Uye kana usina munhu kweMireniyamu (aka uri mutana), ipapo zvichida unogona unyeverwe sei kudana millennials iyi yakakura zvebhaibheri chiono. Unokwidza nokuti vafundisi, nhengo, vabereki, shamwari, nezvimwewo.
Pane zvimwe zvinetso kuti kufunga kwemarudzi kuyanana uye chizvarwa ichi. Hazvisi nyore kudana vanhu vose kuyananiswa uye kuvakurudzira kudana vamwe chete. Heano nemamwe zvipingamupinyi matatu Ndinofunga tine achirangarira millennials izvi:
1. Vamwe millennials vanofunga kwemarudzi Makakatanwa dambudziko vanasekuru vedu.
Zvechokwadi zvinhu zvakasiyana chaizvo zvino munyika ino pane zvadzaimboita. Sekuru vangu vakandiudza nyaya kuti handigoni kudavira,baba vangu akatsutsumwa panguva kodzero dzevanhu sangano, uye amai vangu yakandiudza nyaya kwokuyeuka ari kurambwa makamuri hotera sechinhu child.Those havasi chaizvo zvakaitika dzangu. Inonyoreswa segregation haasisiri chokwadi. Uye zvinhu zvachinja.
saka, vazhinji vedu vanofunga kuti tiri yakadaro yakasiyana zvachose nguva, izvo chinoita kuti nhangemutange ukama hapachina akakodzera kukurukura. Mumwe rapper akati, "Hapana rusaruraganda pamwe Internet. Rusaruraganda chete chaiva-zviri zvizvarwa zvimwe zvakafanana mashanu akapfuura ... urudzi hausi-Ndaiti zvizvarwa. Hongu, zvizvarwa akafanana shanu kare. Rusaruraganda aitarira. Zvinoita vanhu vekare kuti tirambe woramba uri pariri ... "
Zvanzi millennials vakawanda .... "Tiri zvino yapashure kwemarudzi nenzanga. Kune yakawanda vendudzi michato muchizvarwa yedu. Uye chokwadi tine mutungamiri mutema. Zvose kare. "
Zvinosuruvarisa, vamwe zvichangobva netsvakurudzo kuti millennials kupa zvakawanda kwomuromo pakuenzana pane zvakapfuura, asi tichiri ndezvaJosephus sezvaakanga rusaruro sezvo vabereki vedu vakanga. asi, tinofunga tiri post-kwemarudzi, inova mubatanidzwa ngozi.
Ehe saizvozvo, kuchangobva zviitiko kunyange kufanana musaruraganda dzokudetemba pakati Oklahoma Fraternity dzinoratidza kuti rusaruraganda mupenyu uye tsime muchizvarwa yedu. asi zvinosuruvarisa, kana zviri izvozvo nemaune, tikamuramba huriko.
Rusaruraganda kazhinji zvikuru dzisinganyatsooneki, asi hazvirevi kuti zvishoma chivi. It rinongoreva kuti zvikuru sneaky kupfuura kare. Uye kuti anogona kuita kuti runonyengera kurwa.
2. Vamwe millennials vanofunga Social nhau basa iri zvakakwana.
Social vezvenhau chiri incredible chipo. Takaona kunyange kumboona evanhu venhau dambudziko uye vanounganidzira vanhu vari chiedza ichangobva rudzi nyaya iri U.S. Asi zera rangu anogona kuwira nyore mumusungo kufunga zviri zvakakwana kungoti vagoverane zvinhu zvakanaka pamusoro evanhu vezvenhau. Vamwe vanhu vanodana ava usimbe-tivism:kuti Retweet vatsigiri, Vaparidzi 'prices, uye Blog mbiru panyaya idzi, uye kumisa ikoko.
Izvozvo hazvina kukwana! Tinofanirwa chaizvoizvo kutora matanho mhiri kuti. Kutaura paIndaneti ichi kana kunyange pakati shamwari dzedu zvakanaka chaizvo, asi hazvina kukwana. Uye kushamwaridzana vezvenhau ushamwari nevamwe ethnicities uye tsika zvakanaka, asi zviri zvisiri kukwana.
3. Vamwe millennials usafunga kuti Shoko raMwari ndiro zvakakwana muzuva redu.
KuvaKristu kweMireniyamu, tiri kurarama muzuva apo Bhaibheri haakudzwi sezvo kamwe. Uye nokuda kuti, chivimbo chedu pachedu muBhaibheri todzokera. In Dr. zuva waMambo, vanhu vakapindura chokwadi chomuMagwaro, asi kwete zvedu. Hazvina mugoveri. Vanoti zvatinoda chaizvoizvo rakasiyana, zvikuru sanganisira mashoko. Uye sei shoko vakafunga kuti musiyano chaiwo chero Parayum?
Hatidi zvakawanda rokuzivisa Gospel Christian, vazhinji Ngatitii. Kwavari, zvose zvatinoda rwechiKristu chiito -as kana kuzivisa Vhangeri harisi chiito. Zvechokwadi tinoda kupfuura kuparidza, asi hatigoni kusiya kuparidza Evhangeri, kana isu tichava chete tine mhando chiedza duku kubatana Ini taitaura kumusoro.
tsime, avo vari zvipingamupinyi matatu Ndinofunga isu nechiso kudana millennials kuti kwemarudzi kuyanana. saka, zvino chii tiri kuita? Kana tiri vatungamiri chechi kana nhengo machechi kana kunyange vabereki, sei isu achitaura izvi muupenyu vezera rangu?
Heano zvitatu nyore rokugadzirisa. Ndinofunga neimwe kero izvi zvose zvitatu pamusoro matambudziko. Uye chikuru chinhu ndinoda kusamuendesa musha ndechokuti chete Vhangeri unobereka vakabatana mhando tiri pashure.
mhinduro #1: Kuparidza Evhangeri Reconciliation
Ndinoziva kuti zvinoita pachena, asi zvakakosha zvakare kuti vaifungidzira uye akatarisa pamusoro.
Ndakagara chete takatamira muAtlanta kubatsira kudyara chechi itsva, asi ndisati kuti ndaiva patsvimbo ari mukereke D.C. uye nhengo ikoko kwemakore mana. Munguva yangu ikoko, Ndakaona chechi kukura zvikuru munyika kusiyana, uye yakanga yakanaka chinhu kuona. Paiva dzakawanda dema nhengo, Chinese nhengo, vakwegura nhengo, uye muduku nhengo. Zvaifadza kuona rubhabhatidzo pakanga ichi kusiyana anopenga pakati pavanhu vaMwari akanga rokuponesa.
Yakanga isiri kusiyana akakwana, asi akanga akanaka. Uye ndinofunga kuti zvakaitika, kwete nokuti chechi nguva yakawanda yedu kutaura kwemarudzi kuyananiswa, asi nekuti takapedza nguva yedu kutaura chaizvo shoko rokuyananisa.
Nei kusiyana zvinoitika?
Jesu anoti John 12:
asi ini, kana ndasimudzwa kubva panyika, ndichakwevera vanhu vose kwandiri
Jesu akati kana iye akasimudza, zvichireva paaizomutsa kufa pamuchinjikwa, angadai vaswedere vanhu vose pachake. Haana kutaura dzimwe mhando yevanhu, asi vanhu vose. Haadi kusarura pano. Apo mupositora Johane anoshandisa shoko rokuti "vose,"Hazvirevi Munu, asi zvose vanhu nemapoka. Kungogumira Israeri, asi zvose mamwe marudzi. Mwari akasika siyana, Jesu akafa kuti vaswedere siyana kuti Pachake.
Ndiyo moyo yedu kukurukura pano. Chinhu wakapatsanura kwatiri chivi. Mudzi rusaruraganda uye rudzi Makakatanwa uye kwemarudzi kuparadzana chivi. Uye atova Kristu wakandiitira chivi rufu akundwa kuvanhu vose. Tinofanira kuzivisa mashoko kuti.
zvimwe, Tichava kutambisa nguva yedu kuedza kuumba rwakasiyana kubatana mhando pane kugamuchira kubatana Jesu yakatobuda akasika. chiratidzo 5 inoti Jesu, "... Yakatengwa Mwari vanhu kubva mumadzinza ose, mutauro, vanhu, uye rudzi. "Izvi zvave urongwa hwaMwari zvose pamwe, uye isu kuwana kuchiudza!
Handizivi kana wabatwa kuvimba mashoko kuti muushumiri hwako. Ndicho chombo chedu chikuru.
kubatana Gospel runopfuura zvikuru kupfuura vazhinji tirangarire. In VaEfeso 4, Pauro anotaura nezvazvo kubatana kwakadzama. Cherechedza zvose nguva anoshandisa shoko rokuti "munhu."
Kune muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete rwevharanda kudanwa mumwe wako Ishe, kutenda chimwe, rubhabhatidzo rumwe, Mwari mumwe uye Baba vavose, ari pamusoro pavose uye kuna vose uye muna vose. Ephesians 4:4-6
Ndizvo Hwakadzika kupfuura rumwe kubatana yatiri anoshandiswa. Zvino Evhangeri kunodiwa kuti ayananise pakuti zvakadzama nzira.
Isu millennials tinoda chete Gospel munhu wose anoita. Uye pave kubatana kwechokwadi. saka, ngationei kuramba kuvimba nayo uye vachihuzivisa, kunyange kana tsika yedu asingadi kunzwa. Munguva vakwanise tsika, tinoda kuona mutemo, uye tinoda kuona kururamisira. Asi ngatirege kukanganwa pamusoro chii kare mutongi zvose Tsuro.
Vhangeri chete anogona kusika kubatana uku. OK, saka chii zvimwe zvingaitwa varipo mberi chete kuziviswa?
mhinduro #2: Murwire Gospel rudo nekunzwisisa
Tose tiri chaizvo kujairana nemashoko aJesu ari John 13.
Tarisai John 13:34-35. "A murayiro mutsva ndinopa kwamuri: Kudanana. Sezvo ini ndakakudai, saka munofanira kudanana. By izvi vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu, kana mudanane. "
Asi izvi zvinorevei, uye izvi chaizvo somunhu? Rudo urwu anotaura nezve pano ari rudo dzvene mumwe uye kuzvipira kusina udyire wavo zvakanaka. Tinofanira kuva kuti rudo mutsvene dananai. Tinofanira kuita kuti mumwe zvakanaka. Tinofanira kuda mumwe kuziva Kristu zvakawanda, kura zvakawanda, uye kuti vabudirire. kudyidzana ose tine nomumwe nomumwe anofanira hwokuratidza rudo.
mumitumbu Uyu rudo umwe pacharo ari wandei. Mamwe Testamende Itsva anoisa zvishoma asi nyama pane rudo urwu sokunge.
Galatians 6:2 – Takuriranai mitoro
Ephesians 4:32 – Iva netsitsi kune mumwe nomumwe
Philippians 2:13 – funga vamwe nani kupfuura iwe
Hebrews 3:13 – kurudziranai zuva nezuva
James 5:16 – tinyengetererane
1 Peter 3:8 – Love sehama
Ndizvo rudo zvakakomba.
Usarera chikamu ani Ndini
Heinoi chinhu, kana tava kudanana, tinofanira kuziva mumwe. Tinofanira kunzwisisa mumwe. Ndinogona sei kutakura mitoro mukoma wangu, kana handizivi chii mitoro yake? Ndingava sei tsitsi kune imi, kana handizivi nezvinetso vanoyera pauri? Kunzwisisa mumwe kunobatsira mumwe wedu rudo tsime. (dzokorora)
"Handitombozivi kukuonai sezvo dema."
Makore mashoma apfuura, Ndakanga vachikurukura neshamwari yepedyo yangu uyo ​​chinoitika kuti white.We vaidzidziswa mushy sehama rudo mhando nguva. Akati kwandiri, "Kwandiri, unongoda shamwari yangu Trip. Handitombozivi kukuonai sezvo dema. "Zvino ndava kunzwisisa akanga achiedza kukurukura neni. Akanga asiri kuenda kundida kupfuurwa kupfuura dzimwe shamwari dzake. Asi mhiri, Ndinofunga kuti chinhu unhelpful nzira kuona vamwe. Zvaizova zvakafanana neni achiti imwe shamwari dzangu kuroora, "Munoziva ndinongoda kukuonai Johnny. Ini hatitombozvioni kuti uri kuroorwa. "Zvakanaka, iye oga. Uye vazhinji mukurwisana ake, zvido, uye matambudziko vari kuenda kuti chinhu chokuita chokwadi kuti iye oga.
Uye saka ndaikurudzira ushamwari hwangu arege kufunga kunyanya pamusoro nokusviba yangu nguva dzose achitaura kwandiri asiwo kusanyepedzera kufanana hazvina ikoko. Nokuti, uye kunochinja upenyu hwangu.
1. Nekuti ndiri mutema. Ndinofarira kuva mutema. Uye Mwari akandiita iyi nzira.
2. Pane nemamwe zvakaitika kuti huchiuya yokuva vatema, kana kuva mudzidzi, kana amai, kana kusaroorwa.
Zvakaitika My dema
Vamwe vedu haufaniri kufunga pamusoro urudzi redu zvikuru muupenyu hwedu hwezuva nezuva. Uye zvakanaka. Asi kune vamwe vedu kuti vaite. Uye ndinogona chete kutaura ini yangu dema ruzivo. Ini handigoni kutaura kuti munhu wose.
Pane imwe mutoro kuti ini, uye vanhu vazhinji vatema, kutakura. Isu kutakura mutoro nokuziva rinodzvinyirira nhoroondo munyika yedu: kuti vechitema havana vaiona izere vanhu, kuti zvimwe nhamba iri mari yedu vaiva vanhu vatema vakaita pfuma, achiziva rusaruraganda kuchiripo, uye kuva chokugamuchira kuti rusaruraganda dzimwe nguva.
Kuziva izvi anochinja nzira uchida mumwe munhu.
Pane zvave kazhinji apo zvinhu zvave vaifungidzira nezvangu(kuti hazvisi zvechokwadi) chete kwakavakirwa chitarisiko changu. vazhinji nguva, Patova vaifungidzira kuti ndiri tsotsi whenI kwaisagona kuva zvakare kubva. nguva zhinji Patova vaifungidzira kuti ndiri mbeveve uye vasina kudzidza. nguva zhinji Patova vaifungidzira kuti ndine muduku rangu jena nevezera kana kuti handisi tangofanana. Zvino vanhu vanofunga kuti vakaita pachena kwandiri. Tisingatauri vanhu tsvaga vadiwa vangu vari zvinokuvadza nenzira. Kufanana kunzwa vanhu vanoti, "Mukoma wako kinda runako, nekuti musikana mutema ndinoreva. "Sokunge matema hazvikoshi yakanaka. Pane mifananidzo iyi muupenyu hwangu uye muupenyu mazhinji. Ndinofanira kuva hurukuro nemwanakomana wangu, sezvakangoita baba vangu neni, kunyevera iye kungwarira uye kuti pane vanhu vasingazoiti kufanana naye nokuti iye nhema. Uye nemamwe mutoro kuti ndine kutakura.
Nei Zvakaitika nyaya?
Asi nei nyaya iyi? Nei Ndiri kukuudzai izvi zvose? Nemhaka murayiro kuti kudanana. Kungofanana munoda amai vako zvakasiyana nevamwe, uye vakuru vako, zvichidzika-wakakomborerwa vanhu, unofanira kuda ethnicities yakasiyana nemamwe nzira. Tine nemamwe mufaro, mitoro, uye zvakaitika, uye haugoni kuda vamwe zvakanaka kana iwe dzinga kana kusateerera kwavo nemamwe zvakaitika.
Ndinoyeuka kutaura hanzvadzi Chinese akanga kubatana chechi yedu. Akanga chete ava inoti kwenguva pfupi, uye sezvo iye achitaura zvakaitika kwaari pamwe mharidzo, iye akatsanangura zvakaoma sei akanga kwaari kutevera. Handina angadai akafunga nezvazvo kuti zvikuru kudaro. It zvakachinja zvachose nzira ndikacherekedza ruzivo wehanzvadzi akafanana naye kuchechi kwedu, uye yakandibatsira kunyatsofunga nezvokuti sei kuvada.
Chete Vhangeri anogona kubereka vana sezvibayiro rudo urwu. saka, tinofanira kudzokera kuna Jesu vakaicheka matiri. Zvakaoma, unounza kwandiri pandakapedzisira pfungwa.
mhinduro #3: Usafungidzira Zviri Nyore
Kusiyana rinoratidza runako uye zvokwadi Gospel. Kana mumwe munhu anouya kuchechi kwedu, uye vanoona siyana-ane zvakasiyana-siyana mhando havaruoni munyika-rinovapa muchidimbu kubwinya Gospel. Rugwaro runoti ani naani anodana zita raJehovha achaponeswa-kwete chete boka rimwe vanhu-uye yakanaka apo kuti anogona kuva vakaratidza mumuviri yeko.
Kusiyana anoita zvinhu kuoma
Kusiyana chinhu chakanaka; asi hazvisi nyore. Ose chechi-kunyange kana vanhu vane imwe urudzi, zera, background- ane nyaya nokuti tiri vatadzi. Asi kusiyana zvinogona kukonzera pachavo nyaya yacho nemamwe. Tose kuuya kwedu siyana, zviitiko, presuppositions, vakanga vaine kwavakarerekera, uye mukwende pamwe nesu. Uye dzimwe nguva kuti zvinoita kunetsana.
Rugwaro hakusi vasingazivi kunetsana uku. Kunyange muchechi yekutanga, paiva mapoka mhiri kwemarudzi mitsetse (sezvakanyorwa muna Mabasa). saka, sezvo zvakaoma, heano zvishomanana anongoitika mazano kuti sei kushanda kuburikidza nematambudziko iwayo:
Dzinobatsira Tips nokuti marudzi Reconciliation
1. Musazvidza vanhu avo vakasiyana zvakare zvakasiyana.
kusawirirana kwavo havana chikuru. Tsvaka kunzwisisa, asi achiri pamwe navo anowanzoita. Ndinogona kufunga nezvenguva apo ndakanga adzoka Philly, apo mumwe purofesa dai nguva dzose kutaura neni zvakasiyana. Aizoita kukwazisa vamwe vadzidzi pamwe, "Mangwanani akanaka,"kana, "Good kukuonai." Asi iye akaramba kuzondiona uye kamwe kamwe itii, "Chii kumusoro imbwa?"Kana kuti" Chii chiri kuitika murume wangu?"
Aigona kunge aiziva kusiyana angu pasina kunzwa akafanana aifanira kutaura neni nenzira yakasiyana.
2. Usafungidzira pfungwa.
madzinza, zera mapoka, nezvimwewo. dzine vanhu. People Zvakaitika zvakasiyana. Vamwe pfungwa anosetsa mururame, asi vamwe tsamwisa. Yokuzivana nomumwe somunhu.
3. Edza kwete chete anodirana vanhu vanotarisa semi.
Neune kuvaka ukama nevanhu havatarisiri semi. Rwisa muedzo chete nguva pamwe vabereki waizotenda zvikuru sezvingatarisirwa anobatana. After chechi, nemaune kutaura nevanhu vakasiyana. Kwete sezvo basa, asi nokuti chipo muviri sevaya vanhu vane semi.
4. Neune kutsvaka kunzwisisa vanhu.
Enda pakadzika muukama. Bvunza mibvunzo. Nyatsoteerera uye kunzwira tsitsi vanhu nemamwe zvakaitika. Kunyange kana uri norupokano chinhu munhu anoti, asati kuiona, kuvateerera uye kutsvaka kunzwisisa
5. Utsungirire kuburikidza matambudziko uye kuwedzera marwadzo.
Kusiyana zvakaoma, kunyanya kana isu kutaura pamusoro rudzi / dzinza. Vamwe Kukurukurirana vanogona tya. Nyasha mumwe nomumwe. Nguva dzose fungidzira akanakisisa uye kwete yakaipisisa. Kana munhu achitsvaka kukunzwisisa akakugumbura, nyasha uye achivashivirira. Vari kuedza. Regai kuisa masvingo uye kuti hazviiti kuti vanhu vawane pedyo uye kunzwisisa. Chinhu vaviri-nzira mumugwagwa.
Pakuedza kunzwisisa munhu, usatya kubvunza mibvunzo kana kutaura chinhu chakaipa. Unofanira kusarudza mashoko ako nokungwarira, asi uchava kutora ngozi uye kutarisira hama nehanzvadzi dzako kuva nenyasha.
Usakanda mapfumo pasi kana zvakaoma. Izvozvo zvinotisvitsa munhuwo kushivirira-siyana panzvimbo rakabatana kusiyana.
6. Zvibvunze kana uine zvekungofungira pamusoro marudzi mamwe / vemazera / socioeconomic mapoka.
Mubvunzo tinofanira tose kubvunza isu. Basa kufunga rutsigiro / nokururamisira. Tose tinofanira kubvunza nzira tinofunga nezvevanhu yakasiyana isu, kusanganisira siyana patsika uye ethnically. Chii chinouya mupfungwa dzako kana mayambuka munhu mumugwagwa? Chii chinouya mupfungwa kana ukaona navo muchitoro? Tinofanira mubvunzo pachedu uye toedza kuona vanhu nzira Mwari anovaona.
7. Chengeta kukurukurirana kuenda.
Izvi zvinofanira kuva mumwe kakawanda. Izvi hazvisi angambosvika misoro hurukuro. Izvi zvaireva kutanga dzimwe muchikurukura. Kubatana kusiyana zvikasaitika pamusoro tsaona. Uye kana tisingambotauri kutaura nezvazvo, hatingatyi kuziva uye kushanda vakananga payo. zvinokunetsa Share nokutamburira, asi basa nechokwadi mune kukurukurirana izvi vane tsitsi, utetsa, nyasha, uye rudo.
Kana tisingadi kutaura nezvazvo, isu kumhanya kupinda ngozi kuramba kufunga kuti dambudziko iri atoita chagadzirisika kare. Zvino kana matambudziko varipo, asi isu tiri kuziva, akafanana education mumba mako. Unogona muka rimwe zuva pamoto! Tinofanira kungwarira zvakakwana kurwisa zvakanaka.
8. Fungisisa magwaro uye kunyengetera Mwari achakupai chido kubatana.
Kubatana ndiro hombe, saka tinofanira kunyengetera kuti Mwari aizokura wedu chido nokuti. Tiri akarayira kuti pfungwa imwe. Tiri akarayira kuziva chokwadi kuti tiri umwe muna Kristu. Iyi haisi pfungwa isu akasika. Tarisai VaEfeso 4. Tarisa pose zvaMwari kuna Abrahamu Genesis. Tarisai sei zvose kunoguma muna Zvakazarurwa. Uye munyengetere Mwari angadai ndikupei chido vakabatana mhando ichi.
asi, sezvo takave akati kakawanda kare, Vhangeri chete vanogona kubereka mumwe yechibairo rudo uye kubatana urwu.
Ratidza The World
Tinoda basa kuisa Evhangeri iyi vanoonekwa kuti nyika kuona.
Munguva uye nguva inoita zvakawanda nemapoka kupfuura kare, Ishe vanogona kushandisa ichi. Shoko raMwari ndiro zvakakwana. Uye vanhu vaMwari vakaita mufananidzo anoshandisa Mwari kuti Shoko rake bani. Imwe Akashandisa kuti Vhangeri Rake chipenye yakajeka.
Kwete vatema nevachena imwe kamuri, asi vatema nevachena mumhuri imwe.
kuti Hwakadzika, truer kubatana.
Michael • Kubvumbi 9, 2015 pa 11:47 ndiri • pindura
Vamwe kwazvo pfungwa pano. Ndiri chena, asi akaenda chesekondari uye nhabvu kusvika zvose vakomana matema. saka, Ndaiva Zvechokwadi vashoma kuchikoro yangu yakakwirira (uye kure mune yokuchinjira mbatya kuchikoro-kamuri). Kukura muna Arkansas-Missisippi Delta, rudzi kusawirirana vaiva (uye vachiri) rworudyi pamusoro pechiso. Imi vanonzwa kunaka netsinhiro mativi pamusoro pomumwe. It chichirwadza. Chii chakaoma chiri kwakadziviswa rwenyu munhangemutange kuedza kusvika kuna nevakomana rudzi. Ndakaona ruoko yokutanga sei rusaruraganda anogona zviri shure yakanyangara musoro mukati chechi. Hazvina ipa. Ndinoonga nokuda vakomana semi, rwendo, vanoda kuedza uye kunangana nyaya idzi mumaonero vhangeri nezveBhaibheri. Tikanzi kuda hama yedu, pasinei noruvara rweganda hama yedu zvinoitika kuva. Ndinoshuva nokuti zuva iro multi-rudzi machechi dziripo mhiri Delta. asi, chete nzira tichava kuwana pane nokutsvaka kurarama panze vhangeri zuva nezuva uye kuva zvechokwadi chiziva nezvazvo.
Robin • Kubvumbi 9, 2015 pa 3:12 pm • pindura
MUDE ichi, rwendo! Handina vachangobva akatanga kutungamirira vorudzi kuyanana denderedzwa uye kana vaverengi angada dzisingatengeswi hweutungamiri, vanogona kushanyira nzvimbo iyi download http://www.latashamorrison.com/2015/02/grace-based-bridge-building-pt-1/
Ida chii iwe wakati pamusoro dzisingakanganwi kusiyana kwedu uye muMagwaro kubatana!
“Kwete vatema nevachena imwe kamuri, asi vatema nevachena mumhuri imwe chete.” AMENI!
KwasiAgbottah • Kubvumbi 9, 2015 pa 3:23 pm • pindura
Zvakanakisa. saka aifanira. Saka zvinobatsira. Ini muchashandisa izvi. Ndatenda.
Rolfstlund • Kubvumbi 10, 2015 pa 6:47 ndiri • pindura
Ndakati pamberi – Trip Lee ndiye muparidzi ane chaizvoizvo zvakanaka uye zviite dzakajeka, nyore uye nzira yechokwadi …. wakakomborerwa !!!
Damien • Kubvumbi 30, 2015 pa 4:28 pm • pindura
Mutsindo, zvakajeka uye zvipfupi.
Otis • Chikumi 27, 2015 pa 8:39 ndiri • pindura
Nhasi wangu nguva yokutanga pamusoro webpage ichi. Ndave kutevera Trip nenyasi mumhanzi pamusoro 3years apfuura kuburikidza Lecrae. Ndinotenda Mwari kuti upenyu hwake uye ndakasvirwa chaizvo dzidziso iyi. Ndinogara Ghana apo 99% tiri vatema asi dambudziko redu pano zvakawanda urudzi.(war kwemarudzi muGhana kunyange nokuda vashanyi.) Ini kwaireva vamwe vanoonekwa sezvo ” zvechokwadi vanhu”. Ndakadzidza alot kubva nedzidziso iyi yandichatuma kushandisa muupenyu hwangu zuva nezuva. Mazvita pokumubatira uye Mwari akuropafadzei.
zita • Zvita 14, 2016 pa 3:39 ndiri • pindura
makadii, zvake shamwari !
Lacey • Chivabvu 14, 2017 pa 10:13 ndiri • pindura
Ndanga looknig nokuda mumhanyi seizvi zvachose (uye zuva)
Mwiza • Ndira 1, 2017 pa 2:51 pm • pindura
Great Teaching Trip. ndazvifarira. (Zambia)
Olivia • Chikumi 18, 2018 pa 12:32 ndiri • pindura
Ndinoda ichi kukurukura uye kudzidzisa. Ndiine yakafanana kukurukura nevana vangu vatatu. Ndichava kushandisa ino kusimbisa sei tichifanira kuda kufanana naJesu. Ndinoonga nokuda Trip kurarama vhangeri uye kudzidzisa vamwe kuitawo. Mwari akuropafadzei mose.